Ndingubani? Pt. 2: Kwamkelwe — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ndingubani? Pt. 2: Kwamkelwe
Le vidiyo uvela kwinkomfa Wabafundi kaloku Batesville, NKSK. Nceda usixolele ividiyo nomgangatho audio
ixesha elidluleyo wabeka ezinye iziseko kwiingxoxo yethu ngokuzazisa. Sithetha into eyenza ibaluleke yesazisi; becala ukuba thina asazi ukuba ngubani na, thina asazi ukuba kodwa ubumele ukuze siphile. Kwaye ngoko thina sithetha ngendlela thina kakuhle sisheke wenza, kodwa uyaphule. Kwaye ngenxa ukwaphuka yethu siza abazakluleyo kuThixo yaye bafuna uMsindisi.
Ngale ntsasa esiyenzayo ukuxoxa enye iinyaniso ezintle ngokufunyaniswa kusindiswa nguThixo, leyo nokwamkelwa. Ngeli xesha ke, kwingxoxo yesazisi ijika kancinci. Zonke izinto sathetha ima yokugqibela ukuba izinto zenziwe nguThixo, naziwe nguThixo, yaphulwe, nehlwempu-ayinyaniso wonke Emhlabeni. Izinto esiyenzayo kuthetha ngoku izinto eziyinyaniso abo bamanywe noKrestu. ngoku uthetha ngendlela itshintsha bethu xa baba ngamaKristu
Kutshanje Ndafunda biography of Steve Jobs, iMbangi imboni ngasemva Apple, inkampani inkulu ehlabathini. Oku kwakunomdla ukufunda kuba yingqondi kwaye umntu crazy ngexesha elinye. ubomi bakhe umdla ngokwenene ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni.
ubomi bakhe baqalisa indoda nomfazi xa wadibana, waba umntwana phambi kokuba batshate, waza wamnikela ngenxa nokwamkelwa. ngokwenene Oku kwaba nempembelelo enamandla kuye, kuba wayesoloko baziva belahliwe, waza kamva wamshiya omnye wabantwana bakhe.
Kodwa inxalenye umdla yebali kukuba uhlobo kunye nosapho lothando California yamkelwa kuye. Kwaye ngenene Bamthabatha aze bemphatha ngathi ngunyana yabo. utata wakhe waye injineli waza wamnika ukuyixabisa kwizinto eyakhiwe. Kwaye abazali bakhe wenza imibingelelo emikhulu ukumnika yonke ithuba ukuze uphumelele.
Ngoku inxalenye enkulu impumelelo yakhe kwafuneka yokwenza nabantu, yaza ke. Baya wangulo. Kwanokuba indlela indawo yakhe berhuq negalelo isimo sakhe nokukholwa ukuba uza kwenza into yenzeke.
Into entle ngo kwamkelwa kukuba abantu xanduva ukuba umntu isigqibo ukuthatha uxanduva. Bebona umntwana nto ukuba anikele, baze benze yonke into kufuneka. Umntwana abasweleyo kwaye uyavuma ukuba ukuhlangabezana nezo mfuno. Ke akuyi unyanzelekile ukuba uyenze loo nto, kodwa bakwenza oko ngenxa yobubele.
nokwamkelwa uThixo abajonga ngayo abantu abafana nam nawe efanayo ngeendlela ezininzi. UThixo akafuni ukuba asenze. UThixo unyanzelekile. Thina nto ukuze amnikele. Thina isisifo abasweleyo, yaye uThixo wathembisa ukuba ukuhlangabezana nezo mfuno.
Kodwa umahluko omkhulu kukuba uThixo kusebenzisa kids random adibana. UThixo nokwamkela abavukeli abaye bekhubeka kuye. UThixo ukungasizeleki mthetho. UThixo ukwamkela aboni ezintle kodwa eyaphukileyo. Akukho nokwamkelwa njengoThixo kuba akukho nothando lwakhe.
Makhe sijonge kuYohane 1:10 ukuqala ixesha lethu kunye.
"Waye ehlabathini, yaye ihlabathi labakho ngaye, ukanti ihlabathi ndandingamazi. Yena weza yakhe, nabantu bakhe abazange ukumamkela. Kodwa bonke abâmamkeláyo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe, wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, owabazalelwayo, kungengagazi okanye ngakuthanda kwanyama okanye ngakuthanda kwandoda, kodwa nguThixo. " (John 1:10-13)
mna. Ukuzalelwa Intsapho Yakhe
Enye sinoluvo zixhaphakileyo kwilizwe lunjengolwethu kukuba wonke umntwana kaThixo. Kodwa ke ukuba akukho nto kufundiswa yiBhayibhile. IBhayibhile ifundisa ukuba xa kuzalwa sisheke, sibe abangabantwana bakaThixo, kodwa iintshaba zikaThixo. Kwaye iBhayibhile ifundisa into eyoyikisayo ngaphezulu, ukuba uzelwe nabantwana bakaMtyholi. Oku akuthethi ukuba iimpondo, kodwa siya zilandelayo nguMtyholi yaye izenzo zethu ezikhangeleka yakhe kunam ezifana kaThixo.
Ngoku abantu abaninzi namhlanje bathi izandi ukubaxa yaye akaxoleli. "Kambe ke thina sonke singabantwana bakaThixo,"Ukuze kuthi. kakuhle, ewe, thina sonke ezenziwe nguThixo yaye ngaloo ndlela siza nenzala yakhe, kodwa iBhayibhile ithetha njalo kakhulu xa ethetha babe ngabantwana bakaThixo. Kunjalo ke ukuba umahluko phakathi kokuba uyise womntwana zebhayoloji, kodwa eneneni ukuba ebomini babo, kuthelekiswa ukuba utata othile, babathandayo, udlale nabo, kwaye ukwanelisa iintswelo zabo.
Akufani azalelwe nosapho lwakho, oko okuqhele ukwenzeka ngokuzenzekelayo. Kumelwe ukuba kubekho utshintsho, lizalwa ngokutsha, uguqulelo. Awunguye unyana okanye intombi kaThixo ngenxa yokuba abazali bakho, okanye kuba abahlobo bakho, okanye kuba ufuna ukuba.
Ukuba akuhambi ukuba unyana okanye intombi kaThixo, siye athengwe nosapho lwakhe. Kodwa ngaba oko kwenzeka njani?
Ukuba ucinga ukuba ndibe ngumKristu, Ndifuna ukuba zibuze ukuba kutheni. Wonke ngoku yaye emva koko ndiza kuba moya, kwaye ndiza kucela abantu ecaleni kwam nokuba babe nolwalamano noThixo. Kwaye zikholisa uthi ewe, kwaye ndiya kubuza ukuba kutheni. Ndiza ubabuze ukuba yintoni bazisekela ukuba? Ngaba ukuhamba si semgceni, okanye ukuphindaphinda umthandazo, okanye ufunda ivesi?
Le vesi sifunda nje uthi intle ngokucacileyo, "Kubo bonke abâmamkeláyo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe, wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo…'Ukuba umntwana kaThixo ntoni xa ufumana uYesu. Kwaye ufumana indlela uYesu? Xa bakholwayo kwigama lakhe.
Ngoko cinga uThixo kule philanthropist esisityebi obenikela kwamkela wonke umntu esinye kwifom eMhlabeni umntwana wakhe. Kwaye inye kuphela into ayifunayo kukuba ufumana unyana wakhe ngokholo. Kwaye entsatsheni.
Ngoku siyaqaphela yena nje athi "ukukholelwa kwimfundiso yakhe." Uthi "bakholwayo kwigama lakhe."Kukho umahluko omkhulu kakhulu phakathi ukukholelwa kwimfundiso umntu kunye nokuthembela njengokona ngamnye. UJohn uthi kokufumana uYesu okholosa ngamnye-bakholwayo kwigama lakhe, kwaye yonke wazityhila ukuba.
Ngoko abahlobo, Ndifuna ukwazi ukuba akwanelanga ukuba uthi, "Ndiyakholelwa abanye imfundiso kaYesu, Ndiyakholwa ukuba sithandane, Ndiyakholwa ukuba ndingade ndiye ecaweni. "UJohn uthi abafumana kuye kuthetha bakholwayo kwigama lakhe! Ukubeka ithemba lakho kuYesu. Yonke kaYesu.
Ekugqibeleni, kukho iindidi ezimbini zabantu xa kuziwa kuYesu: Abo amale ngenxa bathanda ubumnyama kwaye abo ke bakholwayo kwigama lakhe.
“Mna ndize ehlabathini njengokuba ukukhanya, ukuze bonke abakholwayo kum bangahlali ebumnyameni.” (John 12:46)
Ngamanye amaxesha sicinga ukuba ukholo zingqinela ezithile iinyaniso ngoYesu. Ndiyazi ukuba yiloo nto ndicinga. Kodwa ukholo loyiswa ngokumthemba. Loo nto ukwazi iinyaniso ungubani na uye wenziwa, pfumelelaniki nabo nezibakala, kwaye ndithemba-ukubheja ubomi bakho kubo.
Ngaba bet ubomi bakho kweli? Ngaba baye bavuma ukuba bamphose konke ukwazi uKristu?
Ubona usixelela kancinci ukuba kuthetha ntoni ukuba umntwana kaThixo, ezizichazayo njengabo "abazalwa, kungengagazi okanye ngakuthanda kwanyama okanye ngakuthanda kwandoda, kodwa nguThixo. "
Uye uthi xa uhamba kuba ngabantwana bakaThixo, kufuneka azalwe. Oko kuthetha sisheke wenza entsha. wethu omdala esifa. Ukuqala kwethu esazalelwa abangenalo ilungelo, ngoko ke kufuneka ukuba azalwe ngokutsha kwakhona.
UYohane ufuna ukwazi ukuba le ukuzalwa yahlukile ngaphezu yethu yokuqala. Yena unika izichazi ezininzi ukuqinisekisa siyaqonda ukuba. "Hayi wegazi" -u ufuna ukwazi ukuba oku akunanto yakwenza yemvelo okanye nomnombo. "Hayi yenyama" -u ufuna ukwazi oko akazange athethwe nomnqweno wesini zabantu. "Na ngokuthanda komntu" -u ufuna ukwazi ukuba le ukuzalwa khange isungulwe mntu. Le ukuzalwa ngokutsha kaThixo!
Azalwe ngokutsha nje ibinzana Abantu benyuka kunye. Yinto ngokwenene abo Ndakhe ukholose kuKristu. Kwaye yiloo nto leyo etshintsha yonke. UThixo ukuba intliziyo entsha, kwakunye amehlo ukumbona, kwaye ngomoya wakhe uhleli kuni. Wena usisidalwa esitsha kraca.
Kwinkolelo yokuba uya kuze ube nako ukufumana ngaphambili ukuba isono yinkolelo zineemposiso. Wena usisidalwa esitsha ngokutsha kungena usapho lukaThixo.
Into entsha eye yenzeka. Ukuba ufana wonke umntu kwakhona, ukuze uyeke ukuba njengabo. Kokuba ndajoyina iqela elitsha kunye neenjongo ezintsha. Kwakhona kufuneka uqonde ukuba ukuzalwa ngokutsha, siye ukhuliswa kwintsapho. Ngoko amalungu entsapho, abazalwana noodade elukholweni. Yabathanda. bakhuthaze. Siza apha ukunceda omnye komnye ukulandela uYesu.
II. Ndingento uNyana Wakhe
Xa usapho igqiba umntu, baya nako ukuqinisekisa ukuba umntwana akafuni uzive ngathi nguwe umntwana yamkelwa. Abafuni ukuba bazive ezahlukeneyo litenxile okanye ungathanda ke andingowawo. Kunoko bafuna ukuphatha njengabanye abantwana babo nabo. Ngendlela enye, xa uThixo ubenza ukuba oonyana bakhe neentombi, asiphatha ngayo ifana nonyana wakhe okuphela kwamzeleyo, uYesu.
Ngaba wakha weva umntu ethetha usana mali trust? Oku umntu onabazali usisityebi, kwaye nje ngenxa yokuba bona bazalwa, ke Ngoku sisityebi kakhulu. Ngoko abantu abayithandi kubo, kuba wonke umntu uye kwafuneka asebenze nzima ukuze izinto abanazo. Mhlawumbi bayayivuyela ikhaya labo kunye nokuzonwabisa zabo, kodwa kwakufuneka kusebenza ubomi babo bonke. Kwelinye icala, eli takane esisityebi zange ukusebenza imini ebomini bakhe, kodwa yena va bachacha ngcono kunabo bonke abanye. Uye zonke izibonelelo ngaphandle ukwenza nawuphi na umsebenzi.
ngokomoya, thina iintsana Trust Fund. Kanye ngemvelo yokuba simane ngokutsha kwintsapho kaThixo, sifumana ubutyebi bokomoya. Siye waphila ngokunxamnye nomthetho wakhe, kwaye siye ndigqithe kuye, kodwa xa sibeka ukholo lwethu kuKristu sifumana zonke izibonelelo uYesu wabeyamkele. Yonke umsebenzi uYesu wenza utshintshela kuthi.
Makhe sithethe ezimbalwa ezo zinto.
"Kuba ngenxa yethu, wamenza isono lowo ungazani nasono, ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. " (2 Korinte 5:21)
UYesu ivuliwe iindawo nathi. Waza waphathwa njengathi, kwaye ukhawuezelwe unjengaye. Ngaba oko ngalisa? Xa sele yamkelwe nguThixo, wena kubonwa ilungisa kuye-kungekhona nje njengento emdaka, umoni yanto, kodwa amalungisa.
Nto ngathi umntu ivuliwe iziphumo zovavanyo. Siya kufuna A + nangona si yi, noYesu ubunzima isohlwayo ngokusilela.
Ndiyazi amaxesha xa anibanga iLizwi ngendlela ndibe, okanye xa andikhange ukwabelana iVangeli nabanye abafana ndibe, Ndiva ngathi njengoThixo umam kum. Kwaye kwangoko kundenza ukuthandaza, kuba ndiziva ngathi akafuni kuva kum. Ngaloo maxesha ke kuluncedo ukuba ukukhumbula ukuba xa wamkela mna, wandinika ubulungisa uYesu.
Ngoko ke akukho bathuka ngam ngoku; uyakuvuyela nam kuKristu. isono sam buhlungu kuye, kodwa litshatshazi yam kwintsapho yakhe akatshintshi. Andizange ndenze ntoni na ukuze afumane khona, kwaye akukho nto ndinokuyenza eziya ndisikhuphe. Ndifuna nje ukugcina obathembayo ozohlwayayo.
Oku sindisa ebukhobokeni ezama ukukholisa abanye abantu ngalo lonke ixesha. Mna ngenene nzima ngokufuna wonke ukuzicingela kum. Kwaye into endincedayo kakhulu ukukhumbula ukuba akufuneki ndide imvume yabo, kuba sele kaThixo. Mna sele ime kakuhle naye. Ndinalo lonke imvume asoze ufuna mna
Akukho nto entolongweni ukuze baphile ubomi bakho ngokusekelwe koko abanye abantu bacinga. UThixo ucinga kakhulu nani kuKristu, ngokunjalo ukuba abe ngokwaneleyo. Ukuba unazo zonke imvume asoze kuze kufuneka.
2. uBomi obunguNaphakade
Siye ezuzwe ekufeni okungunaphakade, kodwa kuKristu sifumana ukuze siphile ngonaphakade kunye noThixo. Sifumana intabalala ubomi-ubomi njengoko kwakucetywe ukuba wahlala. Sifumana ukuhlala kunqulo ogqibeleleyo uKumkani ngonaphakade.
Obu bomi a sonke. Kutheni siphila nje? Thina ngoyaba izinto eziba- ngonaphakade uze umsukele izinto ezonwabisayo ngoku. Kodwa kutheni? Le asiyiyo eyona sifumana. Eli lixesha sinayo kulo mhlaba ukuba bamzukise uThixo side sibe kunye naye ezulwini.
Xa sicinga oku sonke sikhe kufuneka senze konke okusemandleni ethu ukuze nje thina. Kodwa xa sikwazi oku nje kwimboniso sinako ukuchitha ixesha lethu ngokutyala ngonaphakade yethu.
3. Love Lobubele & Care
Ndiyamthanda, unyana wam oyintanda. Ndiya kwenza nantoni na kuye. UThixo uyasithanda yaye uya kusinika nantoni ngokupheleleyo ukuba kuhle ukuba sibe. Ngoko ke, khumbula ukuba kukho into musa ukuba ngoku, ayikho kuba uThixo akanako ukuba ayinike. Nto kuba akukho entle kuwe.
ubungqina obungakumbi yokuba thina baphathwa njengoonyana ayinyaniso kaThixo kukuba asinakuze kuhlukaniswe nothando lwakhe. Thina sasimanyene kuYesu, waza uYesu ukuba uYise. Ngenxa yokuba uYesu asinakuze kwahlulwa kuThixo.
umbuzo: Ngoko ke ngubani ukusahlula abantwana bakaThixo kuye? impendulo: Akukho namnye unako ukusahlula abantwana bakaThixo eluthandweni lwakhe.
"Kuba mna ndiqinisekile kukuba asikuko nakufa, nabomi, nazithunywa zezulu, nazilawuli, nanto zikhoyo, nanto zizayo, naziphathamandla, nakuphakama nabunzulu, nditsho nasiphi na isidalwa, ziya kuba nako ukusahlula nothando lukaThixo olukuye uKrestu Yesu, iNkosi yethu. " (KwabaseRoma 8:38-39)
Akukho nto konke Ngendalo ukuba nako ukusahlula eluthandweni lukaThixo kuKristu kuthi. Thina ngoonyana bakhe neentombi.
Xa aba itakane, ngaba wakha umntu kukunika into, ngoko zama ukuba emva? Udade wayedla ukwenza oku kum. Kwakuza kufuneka into yokuba akazange kanye, yaye emva koko uya kumnika lona kum. Kwaba trash kuye. Ngoko ndingathanda kuwuthabatha, bhala igama lam kulo, bangakonwabela oko-oko ngowam. Kulungile, ngoku ukuba unayo ngenene mna esiyiphilayo, ngoku ke ikujonge kum esiyiphilayo kwaye ufuna emva. heyi? Kakuhle kanti phambi andizange kuba Uyabathanda kuyo, ngoku andazi. Yeyam. Ndabhala igama lam phezu kwaye bacinge ngeendlela fun ukudlala ngayo. Oku kufana twatse nendlela uThixo. ukuba ngoku sele wakhe, ubanga ukuba. Uthi, "am!"Akukho bani unako isixhwile kude kuye nothando lwakhe.
Simele sikhumbule oku xa siye ngamaxesha anzima. Akukho maxesha nzima ukusahlula eluthandweni lukaThixo. enyanisweni, ngamanye amaxesha abo amaxesha kunzima bubungqina obubonakalisa ukuba singabantwana bakaThixo.
UThixo nje asinike iimpahla, kodwa yena usinika ngokwakhe. Xa namshiya esiya emva inzaliseko ngokwesondo, siya eshiya into yokwenene kufuna olungeyonyani. Unako kumkhawulela uThixo uve kuye yonke imihla elizwini lakhe. Uya kuyiphulaphula imithandazo yakho aze ayiphendule. Ukuba uthe wasondela kuye wosondela kuni.
III. Nelyo uNyana Wakhe
Yena akayi kubashiya ukuba sindawoni. Usenza ngathi naYe. Ngoko ke asikuko kuphela ukuba usiphathe njengoYesu, kodwa esenza sibe njengoYesu.
Siye sathetha eyenziwayo ngokomfanekiso kaThixo yaye yokuqhekeka. Kaloku uYesu umfanekiso ogqibeleleyo kaThixo, uThixo kungqinelana ukuba umfanekiso wakhe ngokwenza ngathi uYesu. Siqala zikhangeleke sikwi kusapho.
Sathetha ngohlobo lokholo leyo ukulungele ukushiya yonke kwaye babheje yonke uYesu. Xa uThixo ubenza kuthi, yena ukusishiya apho thina.
Bendithetha abanye abafundi nabanye imini bukholelwa kuYesu, yaye umntu othe, "Ndiyakholwa, kodwa ndingavuya ukuba wonwabe. Yiloo nto mna abanje uhleli ngamaKristu. "Kusenokubakho izinto umntu ukholelwa, kodwa uhlobo iBhayibhile ubiza kuba ukholo nonke nina. Itshintsha indlela ujonga isono sakho. Ukuba abuye kuyo.
Phulaphula oko uPawulos uthi:
"Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa; abenza umbulo, nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, okanye amadoda alalanayo, namasela, namabawa, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Naye ninjalo ke inxenye yenu. Kodwa nahlanjwa, na ngcwaliswa, kuloko nagwetyelwayo egameni leNkosi uYesu Kristu, nangoMoya kaThixo wethu. " (1 Korinte 6:9-11)
Ezo zinto ixesha elidlulile. Siza ayichazwanga zezo zinto kwakhona.
ubuya kwenza ntoni xa wabona usana ukuxelela umzali wakhe into amakayenze? Ukurhubuluza ngeenxa indlu odola abazali bakhe ngeenxa? Mhlawumbi ucinga ukuba ndiyaphambana! Ngoba? Ngenxa yokuba abazali, kodwa ufana nomntwana. It's buhlungu xa abantu igunya ezithile kunye namalungelo kodwa angavumi ukuba sihambe kuyo. Kuba nokuba crazier ukuba umKristu bahleli esonweni. Ukuba negunya phezu isono yaye sele unikwe ilungelo ukuhamba inkululeko. Kutheni ukuba ngoyaba ukuba amandla bahambe engamakhoboka?
njengoko amaKristu, UThixo sele enze sibe ngcwele. Ngoku sizama ukwenza ubomi bethu ukubonisa thina kuKrestu yonke imihla. Ukuba nina bakuKristu ayinguwe ulixoki. Wena a besini. Wena a njengesela. Wena njengengcwele. Loo nto akukho gunya kuni kwakhona.
Andazi ukuba yintoni na abantu abaneengxaki apha namhlanje, kodwa kubalulekile ukuqonda ukuba utshintsho status kuye kwenzeka ukuba sele kuKristu. Ndikhumbula ixesha kubomi bam bobuKristu xa ubanjwe kumjikelo amanwele yesono. Kwaye ndaziva ngathi mna ngamakhoboka isono sam. Yaye inxalenye enkulu yokukhula wam ebesibambe le nyaniso: ukuba awunayo ukona. Ndiye babekhululwe ebukhobokeni elidlulileyo
Oko UThixo Uyakhathala Uninzi Malunga
Eyona nto iphambili uThixo wenza ebomini bakho ukwenza ukuba ngcwele. Ngaphezu nguye ochaphazelekayo malunga intuthuzelo yenu, nguye ochaphazelekayo malunga bakho yobungcwele. kumaHebhere 12, umbhali ethetha ingqeqesho ebomini bethu. Ngamanye amaxesha ubomi iyakrakra. Kodwa kwacaca ukuba xa siye ngamaxesha anzima, oko akuthethi uThixo akayithandi kuthi. Eneneni ke uyasithanda ngokusenzela maxesha anzima. Olu qeqesho igama isetyenziswa lithetha uqeqesho. UThixo esiqeqeshela yaye isenza ukuba sibe ngakumbi njengoYesu. Esenza sibe ngcwele.
Bekuya kuba luthando lukaThixo hayi kuqeqeshwe yaye kusenza sibe ngcwele ngaphezulu. Oko bekuya kuthetha ukuba awukho noonyana bakhe. Ngamanye amaxesha, lilo uyasiqeqesha indlela yethu ngenxa yesono. Xa uthe wona, kwaye kukho imiphumo ebuhlungu, musa ukuba asuke nje. Kufuneka ucinge ukuba uThixo bekululeka. Yena ebonisa oko isono sizisa, yaye ekubumbeni ukuba ndikwenze ube ngakumbi noKristu. Loo nto ifana thina scrawny zezi, nezilingo kusenza sibe Buff. UYesu buffness ngokomoya egqibeleleyo, uThixo ufuna ukuba sibe njengaye.
Ekugqibeleni lo umsebenzi kaThixo. Uyayenza ngeenzame zethu, Kodwa ukuba uKristu yena unako yaye uya kuyenza loo nto. Ngoko ke musa ngokugqithiseleyo ukuzityhafisa. Ungaziva ngathi awukwazi ukutshintsha ngokwakho, kwaye yinyani. Yiya kwiindawo apho uThixo uye wathembisa uya kutshintshe.
Ukuba ungumKristu, kubalulekile ukwazi ukuba ngubani na na izithembiso zikaThixo kuni. Wena zamkelwe ziye. Wena unyana okanye intombi kaThixo.
Unyana wam ufumana eninzi iingenelo ekubeni unyana wam. Ndiya umnyamekelayo, amkhusele, kwaye uqinisekise uye wondla. Abo amalungelo afanayo azinikezelwanga ukuba nje nawuphi na umntwana ngeenxa. Kodwa ke oko akuthethi ukuba awukwazi kwamkelwa.
I Vangeli umyalezo yeyona kuphela nebandakanyayo ehlabathini. Ezi ntsikelelo kuphela uye kwezinye, kodwa ziyafumaneka kuzo zonke. Trust kuKristu. UThixo uya kwamkela wena. Uya kubanika izinto Zange ezuzwe-wokuqala ulwalamano kunye naye niye.
1. Yintoni umahluko oko kuya kwenza ukuba sibe ngabantwana bakaThixo?
2. Zeziphi iintlobo umahluko ukuba abantu kum qaphela ukuba mna kwintsapho kaThixo?
3. Yintoni eyona sinombulelo ngokuba ngumntwana kaThixo?
4. njani into yokuba uye ugwetyelwe, wakhululwa kuso isono ukutshintsha njani indlela singayilwa?
5. Yiyiphi indima iLizwi likaThixo ukudlala ekubeni uYesu ngakumbi?
6. Yintoni onokuyenza ukuba akuyi ezikhula onjengawe kufuneka?